တောင်ရေးမြောက်ရေး စာစုများ: စင်ကာပူ ဒုတိယအကြိမ် စာပေ ဟောပြောပွဲ
Posted by Moe Tain Nyo at 12:01 AM
အသံဖိုင်သို့ ဗီဒီဖိုင် လေးဖြစ်ဖြစ် Youtubeမှာတင်ပေးရင်ကောင်းမှာ
Moe Tain Nyo September 27, 2010 at 12:36 AM
သူတို့ video ရိုက်နေတာတော့ တွေ့တယ်။
The first picture is Mg Sein Win(bateegone). Thanks for your post.Please keep on writing your thoughts.
Moe Tain Nyo September 27, 2010 at 7:25 AM
to anonymous 2: ပြင်လိုက်ပါပြီ ကျေးဇူးပါပဲ
Rita September 27, 2010 at 8:53 AM
ဆရာလယ်တွင်းသား ခန်းမကြီးအကြောင်းပြောတာ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားတယ် ထင်တယ်။ မသိလိုက်ဘူး။
ဆရာမောင်စိန်ဝင်း မီးစက်အကြောင်းပြောတာကျ မမီလိုက်ဘူး။ ဆရာ စ ပြောနေတဲ့အချိန် ladies ထဲ ရောက်နေလို့။
3 ယောက်လုံး ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ (အထူးသဖြင့် ဆရာစိန်ဝင်း အချိန်မှာ) တွေးမိနေတဲ့ အတွေးတစ်ခု ရှိတယ်။ သူရဲကောင်းတွေကို လက်ခုပ်တီးပေးမယ့် လူတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ လက်ခုပ်အတီးခံမယ့် လူတော့ ဘယ်မှာနေတယ့် မသိ။ ဗမာလူမျိုးတွေက လက်ခုပ်တီးပေးစရာရှိရင်တော့ ဘယ်တော့မှ တီးဖို့ ဝန်လေးမယ့် လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။
Moe Tain Nyo September 27, 2010 at 10:26 AM
မရီတာကို မတွေ့ပါဘူး။ :P